मेक्सिकन राष्ट्रिय गर्व - हामी विश्वास गर्ने बियर Corona संग भन्न सकिन्छ। यो उत्पादन देश विश्व प्रसिद्ध ल्याइएको छ।
जटिल बाटो चरणमा
को Spaniard Alonso डी Herera, एक अद्भुत पेय पारंपरिक जौ बनाइएका खाना पकाउन गर्न Mexicans सिकाउनुभयो जब सूर्य जल भुना यो सबै, 16 औं शताब्दीमा सुरु भयो। स्थानीय विचार मनमा आए। सुरु brewers enthusiastically काम गर्न सेट, र चाँडै उत्पादन सबै पूरै नयाँ स्वाद मनपर्ने सिर्जना गरिएको थियो। Corona बियर यसलाई 1925 मा फिर्ता जारी थियो पहिलो पटक हो। यो भठ्ठी निगम समूह माडल मा मेक्सिको सिटी मा भयो। पी उच्चतम प्रशंसा प्राप्त, र कम्पनी गति जोडले थियो निर्माण गर्न थाले। तीन वर्ष भित्र, बोतल निर्मित उत्पादनहरु को संख्या 8 लाख टुक्रा पुग्यो। सामान "एक धमाका साथ" disagreed। मामिलामा यो राज्य निकै आधारभूत सिद्धान्तहरू जो उच्च उत्पादन गुणवत्ता थिए र यसको उत्पादन को मात्रा वृद्धि भएको कम्पनीको व्यवस्थापन नीति, गर्न योगदान गरेको छ। पहिलो ब्याच विदेश अन्तिम शताब्दीको thirties यसको बिक्री नेटवर्क विस्तार गर्न पठाएको थियो। त्यसैले Corona बियर संयुक्त राज्य अमेरिका मा चिनिन थाले।
विश्व बजार पहुँच
कम्पनी समूह माडल leaps र सीमा द्वारा यसको लक्ष्य विश्वस्त थियो। उत्पादन निर्माण भइरहेको नयाँ बिरूवा शुरू, निरंतर वृद्धि भएको छ। Mexicans नयाँ उत्पादन को धेरै गर्व र यो ज्ञात analogues बीचमा सबै भन्दा राम्रो विचार गर्नुहोस्। को forties, यो पनि एक विशेष विज्ञापन नारा पढ्न जो सिर्जना गरिएको थियो: "। अनि बीस लाख Mexicans गलत हुन सक्दैन" वर्ष बित्यो, र चाँडै Corona बियर संसारभरिका यसको विजयी मार्च थाले। 1985 मा, त्यो अष्ट्रेलिया, जापान, न्यूजील्याण्ड र केही युरोपेली देशहरूमा बासिन्दाहरू प्रयास गर्न पहिलो हुन सक्छ। परिणाम बस आश्चर्यजनक थियो। नयाँ बियर साँच्चै पहिचान छ। विशेष गरी अमेरिका मा प्रेम। यो देशमा, Corona सबै माझ लोकप्रियता दोस्रो स्थान लिए बियर को प्रकार, विदेश बाट आयात। को नब्बे को अन्तसम्ममा, यो undisputed नेता भएको छ। हाल बारेमा 170 देशहरूमा प्रसिद्ध स्थानीय उत्पादनहरु को आपूर्ति लागि मेक्सिको सम्झौता टुङ्ग्याए छन्। त्यहाँ एक वास्तविक युग थियो "मुकुट।"
सबै भन्दा लोकप्रिय पेय, समूह माडल उत्पादित, बियर Corona अतिरिक्त छलफल। यो उज्यालो, फिल्टर lager मात्रा द्वारा प्रतिशत एक गढ 4.5 छ। पेय स्वाद, प्रकाश नाजुक र अलिकति dryish छ। वर्तमान स्वाद MALT र मकै अनाज को बल्लतल्ल देख्न सकिने तीता hops साथ टिप्पणीहरू। आफ्नो मुख मा हरेक घूंट पछि एक सुखद, अलिकति मिठाई aftertaste छ। उत्पादन नियम, unclarified, उज्यालो सुनको रंग उत्पादन छ। यो बियर एक पुरानो पौराणिक कथा छ। यो सबै जनावरहरु को राजा मानिन्छ जो सिंह, एकचोटि, यो प्रयास र indescribable आनन्द आए भने छ। बियर यो यति पनि जनावरको पखेटा भयो कि धेरै मन पर्यो। उहाँले कुनै पनि समयमा रुचाउनु हुर्किसकेका एक पेय रमाइलो गर्न सक्षम सुनिश्चित गर्न को लागि आफ्नो शाही मुकुट दिन तयार थियो। त्यतिबेलादेखि एक पखेटा सिंह एक ग्रिफिन रूपमा चिनिन थाले र जादुई बियर Corona भनिन्छ थियो। र अब तिनीहरू दुवै प्रसिद्ध पेय को लेबल सजाउनु।
रूसी लागि मेक्सिकन बियर
2014 बाट सुरू हुने, रूसी बियर प्रेमीहरूको कला मेक्सिकन brewers अनुमान गर्न सक्षम हुनेछ। रूस मा Corona बियर कम्पनी "रवि InBev" द्वारा प्रतिनिधित्व गरिनेछ। यो हाम्रो देशमा प्रसिद्ध उत्पादन को वितरक हुनेछ। अब, यो माध्यम ले, बियर वितरण केन्द्र र सीधा स्टोर वितरित गरिनेछ। यो उत्पादन बिक्री मूल बोतल क्षमता 0.355 लिटर मा उपलब्ध छ। तारा छ बोतल प्रत्येक multipacks मा पूरा भयो। प्याकेजिङ्ग धेरै सहज र Ergonomic छ। विशेष बारहरू यो उत्पादन खरीदार सामान्यतया chilled सेवा छ। साथै, खोल्न र कागती वा कागति एउटा सानो टुकडा को घाँटी सम्मिलित परम्परागत बोतल। यस्तो विधि मेक्सिको भित्रबाट हामीलाई आएको छ। त्यहाँ, तपाईं थाह छ, कीरा धेरै। तसर्थ, आगंतुकों, तालिका मा बोतल छोडेर सिट्रस मुख टुक्रा कवर। यो केवल बाध्य सरसफाई गर्ने उद्देश्यका लागि र पेय को स्वाद स्पर्श गर्दैन कुनै पनि मामला मा गरेको छ।
रक्सी lowers वा दबाब उठ्छ? र त्यसपछि, र अर्को गलत छ!
कार्यक्रम मा Guessing: लोकप्रिय संस्कार
कति अन्डा एक महिला? रोचक तथ्य र सुविधाहरू
Darin। नाम र भाग्य धारकों
संरचना र दर्शन विषय